‘कन्फ्यूज’ बनाउने संसारका यी अनौठा शौचालय ! « Lokpath
२०७७, १० पुष शुक्रवार १६:२८
‘कन्फ्यूज’ बनाउने संसारका यी अनौठा शौचालय !
प्रकाशित मिति : २०७७, १० पुष शुक्रवार १६:२८
काठमाडौं । शौचालय एउटा यसतो चिज हो, जसको प्रयोग जो कोहिले पनि गर्दछ । हामी घरमा आफ्नो मन लागे अनुरुपाको शौचालय बनाउँछौँ । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई संसारका अचम्मका ट्वाईलेटहरुको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । यी ट्वाईलेटहरु देखेर तपाइहरु नै अचम्मित बन्नुहुनेछ ।
खुल्ला स्थानमा बनेका यी शौचालय नेदरल्याण्ड्सका हुन् । त्यहाँ रोडमा नै ट्वाइलेट बक्स बनाइएको छ ।
जसमा मानिसहरु कुराकानी गर्दै पिशाव फेर्दछन् । त्यहाँका मानिसहरु धेरै वियर पिउने कारणले गर्दा छिटै पिशाव लागिरहन्छ ।त्यसैले एक क्रिएटिभ आर्किटेकले रोडमै ओपन एयर शौचालयको डिजाएन गरेका थिए ।
शौचको काम धेरै मानिसहरु एक्लै बसेर गर्न मन पराउँछन् । तर चीनमा बनेका यी शौचालय हेर्दा कोहि पनि शौचालय बस्न गाह्रो मान्छ नै ।
यो सुन्दर हरियो रङको घाँसको बीचमा बनाइएको शौचालयलाई देख्दा लाग्छ गार्डन भन्दा कम छैन । तर यो सबै शौचालय छिर्ने गेटहरु हुन् ।
त्यहाँका शौचालयमा छिरेपछि एक फोटो तपाईलाई नै नियालेर हेरिरहेको हुन्छ । यो देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ । वास्तवमा यो आइसल्याण्डका ति व्यांकर्सको फोटो हो, जो सन् २००९ मा आएको आर्थिक विपद्का बेला देश छोडेर भागेका थिए ।
कतार विश्वको धनी देश मध्येको एक हो । तर पनि त्यहाँको ट्वाइलेट्स साधारण किसिमका छन् ।
फोटोमा यो शौचालय साधारण लाग्छ तर वास्तवमा यो शौचालय फुल अटोमेटिक हो । त्यहाँ सिट खोलिने देखि लिएर फ्ल्याससम्म तपाईलाई ह्याण्डवश गर्नेसम्म दुख गरिराख्नु पर्दैन ।
कोरियामा शौचालय अटोमेटिक मात्र छैनन्, त्यसमा विभिन्न फीचर्सहरु छन् ।
चीनमा ट्वाईलेट प्लेटहरु आदिले निर्माण गरिएको छ ।
यो ट्वाईलेट बाहिरबाट हेर्दा कुनै फन क्लब भन्दा कम छैन । तर यो सुन्दर डिजाइनको शौचालय हो ।
यो शौचालय एक फ्रेन्डली जस्तो देखिन्छ । र यो शौचालय थोरै संसाधनबाट निर्माण गरिएको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : सूचकांकहरू कमजोर तर वार्षिक लक्ष्य हेरफेर…